K: ကမ္ဘာနှစ်ခု ကြားက.. ရတနာနတ်မယ်
ကမ္ဘာနှစ်ခု ကြားက.. ရတနာနတ်မယ်
မကြာသေးခင် က.. ထွက်တဲ့.. သြစတြေလျ အရှေ့ပိုင်း Griffith University ရဲ့ Review journal အမှတ်စဉ် 27 မှာ ရေးထားတဲ့ Between Two Worlds ဆိုတဲ့.. စာလေး တပုဒ်ကို.. ဆရာမ ဒေါ်ကြည်မေကောင်း ဘလော့မှာ ပေးတဲ့ လင့်တွေ က တဆင့် ဖတ်လိုက် မိတယ်။ အဲဒီ ဂျာနယ်လေးက.. တခါထုတ်ရင်.. ခေါင်းစဉ် Theme တခု အောက်မှာ ၀ိုင်းရေး ကြ တာ မျိုးလေး ပါ ။ အဲဒီ အမှတ်စဉ် ၂၇ က လည်း.. food အစားအစာ အကြောင်း ပါ..။ တော်ယုံ ဆိုလည်း..အဲဒီ ခေါင်းစဉ် အောက်မှာ..ကိုယ်တို့ လို လူတွေ အတွက်.. ဒီလောက် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းမဲ့..စာမျိုး ပါလာမယ် လို့ ... ထင်စရာ အကြောင်း သိပ်မရှိ ဘူး လေ။ တွေ့ မဲ့ တွေ့လိုက်တော့.. ဗမာလူမျိုး တွေ..အတော် စိတ်ဝင်စား တဲ့.. အမျိုးသမီး တယောက် အကြောင်း ဖြစ်နေ တယ်...။
မင်းဆွေ မင်းမျိုး ကုန်းဘောင် ဆက် လည်း ဖြစ်.. ပုံပြင် ဆန်ဆန်..သျှို့ဝှက် သည်းဖို ဆန်ဆန် ...နားစွန် နားဖျား ကြားခဲ့ ရ ဘူးတဲ့.. အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေ၀င်း ကြီး ရဲ့.. ဇနီးဟောင်း တယောက် လည်း ဖြစ်ခဲ့ ဖူးတဲ့.. ရတနာနတ်မယ် ရဲ့ တပိုင်း တစ ပုံရိပ် တချို့ ကို.. သူမ ရဲ့.. အီတာလျံ တက်စကန်နီ တောစာ ပုံစံ ကျွေးမွေး တည်ခင်း တဲ့....နေ့လည်စာ ၀ိုင်း လေး တခုမှာ .. နောက်ခံ ထား ပြီး..ရေး ထား တာ ပါ။
အဲဒီ စာလေး ကို... စိတ်ဝင် တစား ဖတ်ရင်း.. တချို့ အချက်လေး တွေကို.. ရွေးပြီး..ဝေမျှချင် စိတ် ဖြစ်လာ မိတယ်။ ဝေမျှ ချင်တယ် ဆိုတာ လည်း..ဘာ အကျိုးပြု.. ဘာဝါဒ ဖြန့် မှ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။ လူ့သဘာဝ.. ဒီလို အကြောင်းလေး တွေကို.. သိချင် စိတ်ဝင်စားတာ.. မဆန်းလို့ မို့.. ဗမာပြည်က.. စာအုပ်တွေမှာ... မောင်သန်းဆွေ ( ထားဝယ် ) ရေးတဲ့.. မင်းဆွေ မင်းမျိုး တွေ.. အကြောင်း.. စိတ်ဝင်တစား လိုက်ဖတ် ရ သလို မျိုး ပဲ ဆိုပါတော့ လေ...။
ဒီ ဆောင်းပါး အရ တော့.. ဆောင်းပါး ရှင် ကိုယ်တိုင် က.. ရောမ က နေ တဆင့်.. အီတလီ ရဲ့ နာမည် ကျော် .. Tuscany ပြည် နယ် မြို့တော် ဖြစ်တဲ့... Florence မှာ နေထိုင် တဲ့ .. Ms June Rose Bellamy ခေါ်.. ရတနာ နတ်မယ် ရဲ့ Associazione Culturale ArteeGastronomia Orientale လို့ ဆိုင်းဘုတ် ချိတ် ဆွဲ ထားတဲ့.. အိမ်လေးကုို အလည်အပတ် ရောက်သွားပုံ နဲ့ စ ထားပါတယ်။ သူ့ ဆောင်းပါး လေးက.. အီတာလျံ အစားအသောက် အကြောင်း လေးတွေ.. သူမ ချက်ပုံ ပြုတ်ပုံ လေး တွေ တပိုဒ်... သူမ ရဲ့ နောက်ခံ ဇတ်ကြောင်း လေး တွေ တပိုဒ် နဲ့.. တကယ့်.. ပြဇတ် ဆန် ဆန် လေး ရေး ထားတာပါ...။ အဲဒီ အထဲ မှာ မှ.. သူမ ကိုယ်တိုင် ဖွင့်ဟ ပြောပြ တဲ့..တချို့ စကားလေး တွေ ဟာ..တော်တော် စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းပါတယ်။
တကယ်တော့.. ဗမာ့ သမိုင်း မှာ ခေတ်မီသူ..ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လိုသူ လို့ လူသိများ ထင်ရှား တဲ့... ကနောင်မင်းသား ကြီး ရဲ့ မြစ်တော် တယောက် အနေ နဲ့... တင်.. သူမ ဘ၀ က..စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေခဲ့ ပါပြီ။ အင်ဂလို ကပြား ဖြစ်တာ.. ချောတာ လှတာ..ခေတ်ဆန်တာ.. နောက်ဆုံး.. ဗမာပြည်က.. နာမယ်ကျော် အာဏာရှင် ကြီး နဲ့ လက်ထပ် လိုက်တာ ဆိုတဲ့ အချက် တွေ ကတော့.. ထပ်ဆင့် ပိုကဲ ပြီး.. ပြောမဆုံးပေါင်.. တောသုံးထောင် ဖြစ် သွား ရတော့ တာပါပဲ။
- သူတို့ မိသားစု ရဲ့.. အရွယ် အပိုင်း အခြား ပုံရိပ်တွေ ကို.. တွက်ချက် ခန့်မှန်းကြည့် တော့... သူမ ရဲ့ မိခင်.. လင်းပင် မင်းသားကြီး ရဲ့ သမီးတော်..ထိပ်တင် မလတ် က.. အသက် ၃၄ နှစ်မှာ..သူမ ထက် ၁၆ နှစ် ကြီး တဲ့.. သြစကြေလျ နိုင်ငံသား..အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ဘွက်ကီ မြင်းပွဲဒိုင် Mr Herbert Bellamy နဲ့ လက်ထပ် တယ်။ လေးနှစ် ကြာမှ ..သူမ ကို မွေးတယ်။ သူမ ကိုယ်တိုင် ကတော့.. အသက် ၂၂ နှစ်မှာ.ပထမ အိမ်ထောင် ဖြစ်တဲ့.. အီတာလျံ လူမျိုး.. WHO က.. ဗမာပြည်မှာ တာဝန်ကျ တဲ့ ဆရာဝန် တယောက် နဲ့ လက်ထပ်တယ်။ သားလေး ၂ယောက် ရတယ်.. စသဖြင့်.. အရွယ် တွေ..အရိပ်တွေ ကို.. အရင် ပုံ ဖော် ကြည့် မိတယ်...။
ဧည့်သည် အတွက်.. ချက်ပြုတ်..စကားလက် ဆုံ ကြ ရင်း.. နံရံ မှာ ချိတ်ဆွဲ ထားတဲ့.. နန်းဆန်ဆန် ၀တ်စုံ တွေနဲ့.. အဘိုးအဘွား.. မိသားစု ပုံ တွေ က နေ.. သူမရဲ့ ..နောက်ခံ ဘ၀ တွေ.. သူမ အဖေ အကြောင်း တွေကို စိတ်ပါ လက်ပါ ပြော ပြ နေတဲ့.. ရတနာနတ်မယ် ဟာ.. သူမ အတွက်... အိမ်မက်ဆိုး..ဖြစ်ခဲ့တဲ့..ဦးနေ၀င်း နဲ့ ပတ်သတ် တဲ့ အကြောင်း တွေ ကိုတော့.. သိပ် အများကြီး ပြောချင်ပုံ မရ ဘူး လို့ ဆို ထားတယ်။
- အဲဒီ အချက် တွေ ထဲမှာ မှ..သူမ ရဲ့ အမေ..ထိပ်တင်မလတ် ဟာ.. ဖခင် ဖြစ်သူ လင်းပင် မင်းသားကြီး ပြည်ပြေး ဘ၀ နဲ့.. အိန္ဒိယ မှာ နေထိုင် ခဲ့ ကြတဲ့ အခိုက်.. အထက်တန်း လွှာ အသိုင်း အ၀ိုင်း နဲ့ ၀င်ဆံ့ ခဲ့ ပြီး.. ဂျာမဏီ က .. (အရှေ့တိုင်း တိဗက် တောင်တန်း နိုင်ငံ တခုဆီက) * အိမ်ရှေ့ မင်းသား တပါး နဲ့.. စေ့စပ် ကြောင်းလမ်း တဲ့ အထိ ဖြစ် ခဲ့ တယ်.. လို့ ဆိုတယ်။ လက်ထပ် ပွဲ မတိုင်ခင် ရက် အနည်းငယ် အလိုလေး မှာ.. မင်းသား အဆိပ်ခတ် ခံ ခဲ့ ရလို့.. လွဲ ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း လေး ကလည်း..လွမ်း သလိုလို..ဆန်း သလိုလို..။
( စကားချပ် ---- Kalgoorlie ဆိုတာ...မြို့တော် နဲ့ အတော်လှမ်း တဲ့ ... လက်ရှိ..ကိုယ် နေထိုင် နေတဲ့.. ရွှေတွင်း မြို့ ကလေး တခု မို့ပါ..လွန်ခဲ့တဲ့..နှစ် ၁၀၀ ကျော်လောက်က.. ရွှေကျောကြီး တွေ..အကြီးအကျယ် ပေါ်လို့..တကမ္ဘာလုံးက..လူတွေ ရွှေလာရှာ ခဲ့တဲ့.. နေရာ တခု ဖြစ်ခဲ့ ဖူးတယ်။ အခု လည်း..ကမ္ဘာ့တောင်ခြမ်း မှာ အကြီးဆုံး ရွှေတွင်း ကြီး ရှိနေလေရဲ့ )
အဲဒီ မှာ.. မစ္စတာ ဘယ်လာမီ တယောက်.. အသက်ကြီး မှ ရတဲ့.. သမီးလေး ကို.. သူ ငယ်ငယ်က.. ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့.. သြစတြေလျ တိုက်ကြီး ရဲ့ ရေမြေ သဘာဝ တွေ အကြောင်း.. ကာဂူးလီ ဆိုတဲ့.. ရွှေတွင်းမြို့ လေး က.. ထူးဆန်းလှ တဲ့...အဖြူရောင်.. ကတ္တ၀ါ ကြီး တွေ.. အကြောင်း..မြန်မာပြည်က..ကြက်တူရွှေး အစိမ်း လေး တွေ နဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောပြ နေတဲ့ ပုံ ကို လည်း မြင်ယောင် ကြည့်မိ တယ်။
နောက် တော့...ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ဖြစ်..ဂျပန် ၀င်လာတဲ့ အခါ.. သူတို့ မိသားစု အိန္ဒိယ ကို စစ်ပြေး တဲ့.. အကြောင်း တွေ.. သာသနာ ပြု ကျောင်း.. ဆရာမ တွေ က.. သွေးနှော ကလေးမလေး ကို.. နှိမ်ပုံ.. အရှက်ခွဲ ပုံ တွေ... ပြန်ရွဲ့ လို့ .. ကျောင်းက..အထုတ်ခံ ရပုံတွေ ...။ ဂျပန် တွေ ပြန်ထွက် သွားတော့... ၁၄ နှစ် သမီး မှာ.. မိသားစု လိုက် ဗမာပြည် ပြန်လာ ကြပြီး.. မေမြို့ မှာ..အခြေချ နေထိုင် တာတွေ...စတဲ့ အကြောင်း တွေ...ကို.. တခြား စာအုပ် တွေ ထဲက.. အချက် အလက် တွေနဲ့.. .အစီစဉ် တကျ တွဲ စပ်ပြီး...တင်ပြ ထားပုံ က... စာရေးသူ ဟာ.. June Rose တည်ခင်း တဲ့.. အထူးစပါယ်ရှယ် ယုန်သဲချေ အစာသွပ်ဟင်း ထက် ... သူ မ အကြောင်းတွေ ကိုသာ စိတ်ဝင်စား နေခဲ့ လို့ သာ ပေါ့...။
သူမ ရဲ့ ယောက်ျား ဆန်ပုံ.. သွက်လက်ချက်ခြာ ပုံ အကြောင်း.. မိသားစုပိုင် ကားစုတ်ကလေး ကို ကိုယ်တိုင် အင်ဂျင် နှိုး ပုံကို မြင်ခဲ့ ရတဲ့.. မိသားစု မိတ်ဆွေ တယောက် ရဲ့ မှတ်တမ်း အပိုင်းအစ လေး ကိုလည်း ထဲ့ရေး ထား သေးတယ်။ နောက် တခါ..ဗမာပြည်မှာ.. စစ်ပြီးခေတ်က.. ဟိုးလေး တကြော်.. စိတ်ဝင် စား ခဲ့ ကြတဲ့.. Purple Plane ရုပ်ရှင် မှာ.. ဟောလိဝုဒ် မင်းသား ဂရေဂရီပတ် နဲ့ တွဲ ဖက် သရုပ်ဆောင် ဖို့.. ဦးစွာ သဘောတူ ခဲ့ သူ ဖြစ် ကြောင်း.. လည်း သိလိုက် ရတယ်။ အဲဒီ မှာ... ဗမာ့ ယဉ်ကျေး မူ နဲ့ မလျော် တဲ့.. ထုတ်လုပ်သူ ဖက်က..တောင်းဆိုချက် တွေ ကြောင့်...သူမ ဖက်က..ဖျက်သိမ်း ခဲ့ တယ်လို့ ဆို တယ်။ အဲဒီ နောက် မှ သာ.. ၀င်းမင်းသန်း နဲ့သဘောတူ ပြီး.. ရုပ်ရှင် ကို ဆက်လက် ရိုက်ကူး ခဲ့ တာ ဖြစ်ပေ လိမ့် မည်။
နောက် တော့.. အီတာလျံ လူမျိုး WHO ၀န်ထမ်း ဆရာဝန် နဲ့ အိမ်ထောင် ကျ ရင်း.. လွတ်လပ်ရေး ရခါစ.. မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး မငြိမ်မသက် လှိုင်းတွေ ကြား.. ကွန်မြူနစ် တွေက.. သူ့ အမျိုးသား ကို ပြန်ပေး ဆွဲ သွားပုံ ကိုလည်း.. ပြန်ပြောင်း ပြော ပြ ထား သေးတယ်။ ပြန်ပေး သမား ကွန်မြူနစ် တွေ ဟာ.. ခေတ်ပညာတက် ကျောင်းသားဟောင်း တွေ ဖြစ်တာ.. သူတို့ မိသားစု ကို ကောင်းကောင်း မွန်မွန် ရှင်းပြ ဆက်ဆံ ခဲ့တာ.. ။ နောက် တော့..သူ့ အမျိုးသား ပြန်လွတ် လာတဲ့ နောက်..မြန်မာ အစိုးရ ကလည်း..သူတို့ကို နိုင်ငံ က..ခွါ ဖို့ အကြံပေး တာကြောင့်... သူ့ အမျိုးသား တာဝန် ကျ ရာ.. နိုင်ငံ ရပ်ခြားတွေ မှာ လိုက်ပါ နေထိုင် ရင်း.. အီတလီ မှာ.. အခြေ ချ ခဲ့ ကြတယ်။
- ဦးနေ၀င်း နဲ့.. ဇတ်လမ်း စခဲ့ ပုံ ကိုတော့.. ခပ်ပါးပါး လေးပဲ.. ပြောပြ ထား တယ်။ သူ့ အမျိုးသား နဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲ လိုက်ပြီး သားလေး ၂ ယောက် နဲ့ အတူ အီတလီ မှာပဲ နေထိုင်နေတဲ့ တလျှောက်..၁၉ ၆၂ ခု နှစ် နောက်ပိုင်း.. ဦးနေ၀င်း လက်ထပ်မှာ... မြန်မာပြည်ဟာ.. အထီးကျန် ဆန်လာတာ.. ဆင်းရဲလာ တာ တွေကို.. မျက်ခြေမပြတ် သိမြင် နေခဲ့ ပြီး.. သူ့ဖခင် မေမြို့ မှာ ဆုံး တော့ လည်း ခဏ တဖြုတ် ပြန်လာ နိုင်ခဲ့ တယ် ။ ဒါပေမဲ့.. နောက် တခေါက် .သူ့ မိခင် နာမကျန်း ဖြစ် တဲ့ အချိန်မှာ တော့.. မြန်မာသံရုံးက ဗီဇာ ထုတ်မပေး ခဲ့ တော့ဘူး.. ။ အဲဒီ မှာ.. ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ဦးနေ၀င်း ရဲ့ ဇနီး ကစ်တီ ဘသန်း နဲ့ အထက်တန်းလွှာ အသိုင်း အ၀ိုင်း တကြော.. ရင်းနှီး ခဲ့ ဖူး တဲ့ အလျောက်.. ဦးနေ၀င်း ဆီကို သံကြိုး ရိုက် အကူအညီ တောင်းရာ ကနေ... အဆက်အသွယ် ရ ခဲ့ ပြီး.. သိပ်မကြာခင် ၁၉ ၇၈ မှာ.. လက်ထပ် လိုက် ကြတယ်။ အဲဒီ လက်ထပ်ပွဲ က.. ခပ်ရိုးရိုး သာ ဖြစ် ခဲ့ ကြောင်း ကိုလည်း... ‘It was not one of those lavish things.’လို့ သူမ က.. ဆိုတယ်။
ဦးနေ၀င်းက..ဘာကြောင့် ရတနာ နတ်မယ် ကို လက်ထပ်ခဲ့ သလည်း.. ရတနာ နတ်မယ် လို့ အသိများတဲ့...June Rose ကလည်း ဘာကြောင့် ဦးနေ၀င်း ရဲ့ လက်ထပ်ခွင့် ကို လွယ်လွယ် ကူကူ လက်ခံ ခဲ့သလည်း ဆိုတာ.. ကာယကံ ရှင်များသာ.. အကြောင်းမှန် ကို သိ နိုင်မယ် ဖြစ် ပေမဲ့.. ဒီ ဆောင်းပါးလေး ထဲက.. သူမ ရဲ့ စကား တချို့ ကတော့..စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်း နေ ခဲ့တာ အမှန် ပါပဲ။
ဘယ်သူ့ကို မှ တိုင်တည်ခြင်း မရှိ တဲ့ မေးခွန်း ဆန်ဆန်.. အဖြေ မပါ တဲ့.. စကားတချို့ က ...ရည်မှန်းထားတာ တွေ ကို.. ကျမ ဆောင်ရွက် နိုင် ခဲ့ သလား.. တခု ခု ပြီးမြောက် ခဲ့ သလား ... တဲ့။
အဲဒီ အကြောင်း တွေ ရောက်လာ တဲ့ အခါ မှာ တော့..စိတ်လှုပ်ရှား နေဟန် ရှိတဲ့.. June Rose ဟာ.. နေ့လည်စာ တည်ခင်း ခဲ့တဲ့ ပန်းကန် တွေကို.. ရေစင် ထဲကို အသံ မြည်အောင် ထဲ့ နေ ခဲ့တယ်။.. ၀ိုင် အစား ဘီယာ တလုံး ကို ဆွဲယူ လိုက် ရင်း.. ဗမာလူမျိုး တွေ ပါးစပ် ဖျား မှာ... ချိုချဉ် တခု လို တမြုံ့မြုံ့ နဲ့ ပြောကောင်း နေခဲ့ မဲ့.. သူ့ ဇာတ်လမ်း ကို ရယ်သွမ်း သွေး လိုက် သေး တယ်။
လူတိုင်းလို ကြားဖူးခဲ့ တဲ့.. အနောက်နိုင်ငံ ရဲ့ စပိုင် လုပ်လို့.. ဦးနေ၀င်းက.. မောင်းထုတ် ခဲ့ တယ် ဆို တဲ့..ကောလဟာရ ကို မေး တော့...သူမ က.. ရယ်နေ ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့.. သူမ ကို ဦးနေ၀င်းက.. ဆေးလိပ် ပြာခွက် နဲ့ ပစ်ပေါက် ခဲ့ တယ် ဆို တဲ့... မနှစ်မြို့စရာ.. ဖြစ်ရပ် ကို တော့.. သူမ က.. နာနာကျင်ကျင် ..၀န်ခံ ခဲ့ တယ်။
နောက် တနေ့ ချက်ခြင်းပဲ.. သူမဟာ.. စင်းလုံးလေယဉ် တစင်း နဲ့ မြန်မာပြည်က..ထွက်ခွါ လာနိုင် ခဲ့ တယ်။ လက်ထပ် အပြီး..၅ လ ဆိုတဲ့ အချိန်တိုလေး အတွင်း မှာပဲ ..လျင်လျင် မြန်မြန် ဖြစ်ပျက် သွား ခဲ့တဲ့..အဲဒီ.. အကြောင်း တွေ ကို.. သူမက.. Sin of Pride လို့ ဆို ခဲ့ ပြီး... သူမ ကို မျှော်လင့် ခဲ့တဲ့ လူတွေ အတွက် ဘာမှ မဆောင်ရွက် နိုင်ပဲ.. အရှုံး နဲ့ သက်သက် ထွက်ခွါ ခဲ့ ရ တာ ဖြစ်တယ် လို့ ပြန်ပြောင်း ဖွင့်ဟ ခဲ့ တယ်။
၅ လာတာ ကြုံဆုံ ခဲ့ ရ တဲ့ ဦးနေ၀င်း ကိုတော့...တကယ့် ညဏ်နီညဏ်နက် နဲ့ အရာရာ ကို ကြိုးကိုင် ခြယ်လှယ်နိုင်သူ ကြီး တယောက် လို့ သာ.. မှတ်ချက် ပြု ထားတယ်။
“ ဦးနေ၀င်း နဲ့ ရက် ၁၀၀” ဆို တဲ့.. စာအုပ် ဟာ အဲဒီခေတ် သံတမန် လောက မှာ..တီးတိုး ရေပန်း စား ခဲ့ ပေမဲ့.. အဲဒီ နေ့ လည် မှာ တော့... မိဘ ဘိုးဘွား တွေ နဲ့ ကြီးပြင်း ခဲ့ တဲ့ အကြောင်း တွေ ကလွဲရင်.. အာဏာရှင် ကြီး နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်း တွေ ကို ရေးဖို့ စိတ်ကူး မရှိ ပါဘူး လို့.. သူမ က.. ငြင်းဆို ခဲ့တယ်။
လတ်တလော မှာ.. အီတာလျံ နဲ့ အရှေ့တိုင်း အစားအစာ အချက်အပြုတ်သင်တန်း ကျောင်း ကို ဖွင့်လှစ် ထားပြီး... မကြာသေးခင် နှစ်တွေက တော့.. သူမ ရဲ့ အသက် အစိတ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ မြေးလေး နဲ့ အတူ.. မြန်မာပြည် ကို ပြန် အလည် ရောက် ခဲ့ သေးတယ် လို့ ဆိုတယ်။ ..မြန်မာပြည်တွင်းက.. ဆရာဝန် တွေ နဲ့..လူမူ ရေး လုပ်ငန်း တချို့ တွဲဖက် လုပ်ကိုင် နေ သလို... လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ပိုင်းက..ဖြစ်ပွားခဲ့ တဲ့..နာဂစ် မုန်တိုင်း ဘေး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း မှာ လည်း.. ပါဝင် ဆောင်ရွက် နေ တဲ့ အကြောင်း... သူမ ရဲ့ ဧည့်ခန်း မှာ ... တခန်းတနား ချိတ်ဆွဲ ထားတဲ့..အဖြူ အမဲ မိသားစု ပုံ တွေ ရဲ့ ဘေးက.. မြန်မာပြည်..ကျေးရွာ တခု က..ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း တခု ရဲ့ ရောင်စုံ ဓါတ်ပုံ နဲ့ ဆက်စပ် ကြည့် ရင်း... တချိန်က..ရတနာ နတ်မယ် ဆို တဲ့.. ကနောင်မင်း ရဲ့ မြစ်တော် အသက် ၇၇ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး ကြီး အကြောင်း တွေး နေ မိ ပါ တယ်။
မှတ်ချက်- ဖြည့်စွက်ချက် -
* ( စာပိုဒ် ချင်း ရောထွေး ၍ နားလည်မူ အမှား ဖြစ်သွားတဲ့ အချက် ပြန် ပြင် ထားပါတယ်..။ ထောက်ပြ ဝေဖန် သူ များ.. ကျေးဇူးပါ)
နောက်တချက်က...ဒီစာကို.. မူရင်း ဆောင်းပါးပါ..စာရေးသူ ရဲ့ ပြင်ပ အမြင်.. ကာယကံ ရှင် သူမ ရဲ့ စကား လုံး များ အတိုင်းသာ ဘာသာပြန် နားလည်သလို ရေးထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်..သူမ ရဲ့ ဘက် ကသာ ခံစား ဖတ်ရှု နိုင်ပါ လိမ့်မယ်။ ပြောခဲ့သလို..ဒီစာကို.. သူမ အတွက် ကာကွယ် ရှေ့နေ လိုက်ဖို့ ရေးတာ မဟုတ်သလို.. ဘာနောက်ခံ အကြောင်းမှ မပါ.. ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက် မပါ.. ကိုယ်ပိုင် ထင်မြင်ချက် မပါ အောင်..တတ်နိုင် သလောက် ပြန်ရေးထား တာပါ..။
Labels: Burma story , People , Reviews
သိပ်ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာပဲ မကေ...ဒီတခါ ဖတ်ရတာ မလိုအပ်တဲ့ အမှားတွေစာ စာကောင်း တပုဒ်ကို အကျည်းတန် စေတာတော့ အမှန်ပါပဲ ( ဒါက လဲ အပြုသဘော ဆိုတာပါ ) စာကောင်းတွေ များများ ရေးနိုင်ပါစေ။
google မှာ လိုက်ရှာရင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ website ကို ရောက်သွားခဲ့ဖူးတယ်။
အခုလို မကေ အကျယ်တဝင့်ရေးပြတော့ မှတ်ရသားရတာပေါ့...
ဗမာပြည်မှာတုန်းက မအယ်တို့ သိထားတဲ့ ရတနာ နတ်မယ်ဆိုတာနဲ့ တကယ့် သူ့ အကြောင်းက တခြားစီပဲ။စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းတယ်။ တော်တော်လည်း ချောတာပဲ။
အမကေရေ ညီမတို့မမီ=၏လိုက်တဲ့ ရတနာနတ်မယ်ရဲ့ အကြောင်းကိုပြောပြပေးတာကျေးဇူးပါနော်။ အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်။
သူပြောချင်တာက နေဝင်းကို သူ့ဘေးကလူတွေနဲ့မီဒီယာက အဲဒီလိုလူမျိုးဖြစ်အောင်ပုံဖော်ခဲ့တယ်တဲ့။ သူကအဲဒီလို ထင်ပုံမရဘူး။
ပြောစရာတွေ အကုန်မပြောချင်တဲ့အကြောင်းဘာလဲလို့ သိချင်တယ်။ မကေရောကြားဖူးလား။ သူဝတ်ထားတဲ့လော့ကတ်ထဲမှာ အသံဖမ်းစက်ပါတယ်လို့ တရုတ်ပြည်သွားတုန်း နေဝင်းကို တရုတ်က သတိပေးသတဲ့။ အဲဒါကလဲ ကွဲရတဲ့အကြောင်းတခုတဲ့။ ဘယ်ဟာက အချက်အလက် ဘယ်ဟာက ကောလဟာလ မသိနိုင်တာခက်တယ်။
(blogspot မှာ wordpress နဲ့ မန့်လို့မရပါ။ မနီဆီမှာရော၊ မကေဆီမှာရောပဲ)
မကေ လာဖတ်သွားပါတယ်။ ရတနာနတ်မယ်အကြောင်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ခုလို အများသိရအောင် ဘာသာပြန်ပြီး ရှယ်ပေးတာ ကျေးဇူးနော်။
မကေရေ တကယ်ကို ဗဟုသုတရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်က သိထားတာ ရတနာနတ်မယ်ဆိုတာ ဦးနေ၀င်းနဲ့ လက်ထပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသူဆိုတာပဲ သိထားတယ်။ ရွာက ကာလသမီးတွေ ရတနာနတ်မယ် ၀တ်စုံတွေ ချုပ်ဝတ်နေကြတာလည်း မှတ်မိတယ်။ မြန်မာကပြားတယောက်ဆိုတာ အခုမှ သိတယ်။
ကေရေ...ရတနာနတ်မယ် အရမ်းချောလှကြောင်းသာ ကြားဖူးတာ၊ နောက် ဦးနေဝင်းနဲ့ကွဲ ပြီးပြန်သွားတယ် အဲလောက်ပဲသိတာ...။ ကျေးဇူးတင်တယ်ကေရေ...ပုံလေးပါ ကြည့်ရလို့ ချောတဲ့ အပြင် ကျက်သရေပါ ရှိတာကိုး...:)
ရတနာနတ်မယ်ရဲ့တူမ စုဖုယားနိုင်တို့ကတော့ အကိုကြီးနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပဲ ..ရတနာနတ်မယ်ကှိုီုးနေဝင်းယူတုန်းက ငယ်သေးတော့ ကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူး ..ခုပုံလေးမြင်ရတော့ စိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲ...
ကျနော် တို့ကြားဘူးတဲ့ ရတနာနတ်မယ် ကတော့ ဦးနေဝင်း နဲ့ ကွဲသွားတော့ မြန်မာပြည် က ရတနာတွေ အများကြီး ယူသွားတယ်လို့ ကြားဘူးတယ်
မကေ ရေးပြလို့ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်ဆန် သူ့ဘဝလေး ကို သိလိုက်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
ဇီဇ၀ါရေ... တို့ တွေ ဆီမှာ..တခါ ပြောလို့ open id ပါ လုပ်ထားတာကြောင့် word press ပါ ရ ရ လိမ့်မယ်။ ခဏတဖြုတ် စစ်စတန် ကြောင်တာများလား မသိ... ( ဟဲ..ကြုံလို့ ပြန်ပြောလိုက်အုံးမယ်..တခါတလေ လည်း..ဇီဇ၀ါ့ ဆီမှာ.. မန့် လို့ မရဘူး.. တခါတလေ ရတယ်.. )း)
ဇီဇ၀ါ ပြောတဲ့ စတိုရီ ကို လည်း ကြားဖူးတယ်။
နောက် အခု လာဖတ်တဲ့ ..ကွန်မန့်ပေးတဲ့ လူတွေ လည်း.. သူ့မ ရဲ့ ပုံတွေ အများကြီး ညီလင်းဆက် ဘလော့ မှာ ရှိတယ် ဆိုတာ..သတင်း ပေးပါတယ်။ နောက်တချက်က...ဒီစာကို.. မူရင်း ဆောင်းပါးပါ..စာရေးသူ ရဲ့ ပြင်ပ အမြင်..သူမ ရဲ့ လေသံ အတိုင်း လိုက်ပြီး ရေးထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်..သူမ ရဲ့ ဖက် ကသာ ခံစား ဖတ်ရှု နိုင်ပါ လိမ့်မယ်။ ပြောခဲ့သလို..ဒီစာကို.. သူမ အတွက် ကာကွယ် ရှေ့နေ လိုက်ဖို့ ရေးတာ မဟုတ်သလို.. ဘာနောက်ခံ အကြောင်းမှ မပါ.. ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက် မပါ.. ကိုယ်ပိုင် ထင်မြင်ချက် မပါ အောင်..တတ်နိုင် သလောက် ပြန်ရေးထား တာပါ..။
မူရင်းလဲ ဖတ်ချင်ပါတယ် ကေ။ ကေရေးထားတဲ့ ထောင့်လေးကလဲ ရိုးရိုးလေးနဲ့ သိပ်လှတယ်။ တို့ကတော့ အာဏာရှင်ကြီးတယောက်ကို အာဏာဖီဆန်ပြီး ထားပစ်ခဲ့တဲ့ နတ်မိမယ်လေးကို သဘောကျမိတယ်။ သူ့ဇာတ်လမ်းတွေ အဖေတို့ပြောလို့ ကြားဖူးတာတွေ အများကြီး။ သေချာမသိရလေ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလေပဲ။
ှLas Vegas မှာ ရှိတဲ့ Mandalay Bay ဆိုတဲ့ Casino ကြီးကိုလဲ သူ က ရှယ်ယာတချို့ ပိုင်တယ် လို့ ကြားဖူးတယ်။ ဟုတ် မဟုတ် မသိ။ တို့ကတော့ အဲဒီ ဟိုတယ်ရဲ့ အောက်ထပ်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ Rangoon ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးရှေ့မှာ Las Vegas ရောက်တိုင်း ဓာတ်ပုံ သွားရိုက်လေ့ ရှိပါတယ်။
သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတခုပါ... အခုလိုဝေမျှပေးတာကျေးဇူး
သူ့ပုံကို စမြင်ကတည်းက သဘောကျတယ်
် သူ့ရုပ်ရည်က ကျက်သရေရှိတယ် (LB)
နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးလေးမောင် အကြောင်းရော
ညက ရေးပြီးပြီးချင်း..တင်ပြီးပြီးချင်..ဒူကဘာ မှတ်ချက် ၀င်လာတော့..ကျမ တော်တော် နားရှုပ်သွာသေးတယ်။ အဲဒါ နဲ့ အိပ်ချင်မူးတူး သေချာ ပြန်စစ်သေးတာပဲ။ ဒါပေမဲ့..အခု မနက် မှ..ကျမ စာမှာ ပါတဲ့ အမှားတွေ..အရှန်း တွေကို.. ၀ိုင်း ပြော ဝေဖန် ကြတာ မြင်မှပဲ.. မိုးလင်းလင်းချင်း မျက်စိ ကျယ်သွား တော့ တယ်။ ဒူကဘာ ကြီ ရေ.. ကျေးဇူးပါ..။ နောက်တခါ အမှားတွေ့ရင်..ပေါ်တင် သာ ပြောခဲ့ လိုက်ပါ.. အပြုသဘော ဆောင်တဲ့.. ဝေဖန် ထောက်ပြ ချက်တွေ အတွက်..ကျမ က..၀မ်းသာ လက်ခံမဲ့ သူပါ..။
ဘာမှ သိပ်ပြီးသိခွင့်မရတဲ့ အနေအထားကနေ
တကူးတက တင်ပေးတဲ့သူတွေရှိလာလို့ သိခွင့်ရတာ ကျေးဇူးသိပ်တင်မိပါတယ်..
ရတနာနတ်မယ် ဆိုတဲ့နာမည်ကို ရင်းနှီးနေပေမယ့် သူ့ အကြောင်းကိုတော့ သိပ်မသိဘူး။ ခု သူ့ ဘ၀ အစိတ်အပိုင်း တစ်ချို့ ကို သိရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မကေ။
ရတနာနတ်မိမယ်အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားတယ် မ.. ညီလင်းဆက် ပို့စ်တင်တုန်းကလည်း ဖတ်လိုက်ရတယ်.. အခု မကေဆီမှာပါ ထပ်ဖတ်ရတာ.. အရင်တုန်းကတော့ ဦးနေ၀င်းရဲ့ ဇနီးဟောင်းတစ်ယောက်လို့ပဲ သိထားတာ… သေသွားပြီလား ရှင်သေးလားတောင် မသိဘူးရယ်… အခုလိုလေး share ပေးတာ ကျေးဇူး အမ.. :)
စိတ်ဝင်စားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထဲမှာ ရတနာနတ်မယ်လည်းပါခဲ့တာ..
ရတနာနတ်မယ် အကြောင်းပိုစ့်ကို ကိုညီလင်းဆက်ဆီမှာရော၊ အန်တီ့ဆီမှာပါ ဖတ်ရပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ဒီနေ့ မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ်မှာ မန်ဘာတစ်ဦးတင်ပေးထားတဲ့ ကြေးမှုံသတင်းစာဟောင်း ပုံကိုတွေ့မိလို့ အားလုံးတွေ့ရအောင် လင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
(ပိုစ့်မှာ ဒီပုံလေးဖြည့်ပေးလိုက်ရင် ပိုအဆင်ပြေသွားမလားလို့)
ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မကေ။
Whatagreatest post you've ever produced!!! Whatafantastic writing style!!.. Cheers!!..Ma Kay..
ဒီပို့စ်လေးကို သဘောကျလို့ Myanmar Blogs Digest အတွက် ယူသွားတယ်နော်. သိုင်းကျူး.. ;)